बाहि'रियो दाजु भाई माथि श्रीमती देखि स-परिर्ड! नसो' चेको अव'स्था , कल रेक आउँदा सबै च'कित। (भिडियो हेर्नुहोस) - Public 24Khabar
Home News बाहि’रियो दाजु भाई माथि श्रीमती देखि स-परिर्ड! नसो’ चेको अव’स्था , कल...
बाहि’रियो दाजु भाई माथि श्रीमती देखि स-परिर्ड! नसो’ चेको अव’स्था , कल रेक आउँदा सबै च’कित। (भिडियो हेर्नुहोस)
बाहिरियो दाजु भाई माथि श्रीमती देखि स-परिर्ड! नसो’ चेको अव’स्था , कल रेक आउँदा सबै च’कित। (भिडियो हेर्नुहोस)
नवलपरासी घटनामा परिवारका सदस्यले सीसीटीभी पनि हेरेका छन् । केही परसम्म दुई दाजुभाई हात समातेरै हिडेको देखेको बुवाले बताएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका–२ का २६ वर्षीय विजयबाबु पौडेल र उनका भाइ २१ वर्षीय सङ्गम पौडेल बुधबार साँझ मृ’ता वस्थामा फेला परेका हुन् । दाजु विजयको डेढ महिना अघि मात्र विवाह भएको थियो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
बुहारी विवाह भएको दुई महिना नहुँदै एक्लिएपछि परिवारमा त्यो चिन्ता पनि थपिएको छ । वुहारीको परिवारलाई पनि छोराले औषधि खाने गरेको बारेमा जानकारी दिएको बुवाको भनाई छ । बुहारी र उनको परिवारको राजिखुसीमै विवाह गरिदिएको उनको भनाई छ । ६ महिना अघि मात्र यो घरवाट अर्को शव पनि उठेको थियो ।
जेठो छोराको प्रेम विवाह भएको बुवाको भनाई छ ।
बुहारी विवाह भएको दुई महिना नहुँदै एक्लिएपछि परिवारमा त्यो चिन्ता पनि थपिएको छ । वुहारीको परिवारलाई पनि छोराले औषधि खाने गरेको बारेमा जानकारी दिएको बुवाको भनाई छ । बुहारी र उनको परिवारको राजिखुसीमै विवाह गरिदिएको उनको भनाई छ । ६ महिना अघि मात्र यो घरवाट अर्को शव पनि उठेको थियो । दुई युवाको हजुरवुवाको असारमा निधन भएको थियो ।भिडियो हेर्नुहोस
Previous articleसिपाही सँग भागेकी हवलदारकी श्रीमती सम्पर्कमा आइन त ? उदयपुर बाट अन्तिम (हेर्नुस् भिडियो)
Next articleबिप्लबका छोरा प्रकाश र दुर्गा प्रसाईं बिचको पछिल्लो अडियो रेकर्ड बाहिरियो (भिडियो सहित हेर्नुहोस)